VMCZ Inoshora Kurambidzwa kweZBC Kupinda Mumusangano weMDC-T
Sangano reVoluntary Media Council of Zimbabwe, kana kuti VMCZ, rinoti rinoshora zvikuru hunhu hwakaratidzwa nevechidiki veMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, avo vakamborambidza vatori venhau veZBC kupinda mumusangano webato iri waiitirwa kuMkoba kuGweru nemusi weSvondo.
VMCZ inoti vatori venhau ava vakazobvumidzwa kupinda mumusangano uyu mushure mekupindira kwevakuru vebato reMDC.
Sangano iri rinoti mapato ezvematongerwo enyika haafanirwi kushungurudza vatori venhau sezvo vasiri ivo vanozonyora zvinozobuda mumapepa aya.
Vane ruzivo nezvakaitika vaudza Studio7 kuti mutyairi wemotokari yeZBC akasvika pamusangano uyu akapfeka hembe yeZanu PF mukati mehembe yake, izvo zvakazoita kuti chikwata ichi chinzi nevechidiki ava chiende kunochinja mbatya dzacho.
Zvanzi vatori venhau ava vakazodzoka mutyairi abvisa T-shirt yake vakapinda mumusangano uyu zvisina dambudziko.
Munyori mukuru weVMDCZ, VaTakura Zhangazha, vaudza Studio7 kuti vanokurudzira zvikuru kuti mapato ezvematongerwo enyika aremekedze vatori venhau kana vachinge vachiita basa ravo.
Mutauriri weMDC T, VaDouglas Mwonzora, vaudzawo Studio7 kuti bato ravo harina ruzivo rwechiitiko ichi, uye vati kana pane vakarambidzwa kupinda mumusangano wavo, vaifanirwa kusvitsa zvinyunyuto zvavo kwavari.